အလင်းရောင်ကိုဆော့ကစားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » အလင်းရောင်ကိုဆော့ကစားခြင်း
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Dec 11, 2012 in Photography | 10 comments
2 ရဲရဲမှည့်မှည့် အလင်းစက်
ဟုိူးအရင်ခေတ်က ကင်မရာနဲ့ဆော့ကစားဘို့ဆိုတာ အတော်လေးကို ငွေကုန်ကြေးကျ များတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲတော့လဲ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူ ၀ါသနာကြီးလွန်းသူနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများသာ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကို်ယ်တိုင် ဓါတ်ပုံပညာကို အများကြီးသိစရာမလိုဘဲ အဆင်သင့်လုပ်ပေးထားတာလေးကို
ဆွဲသုံးလိုက်ရုံနဲ့ ပုံလေးတွေ လှတပတ ရလာနိုင်ပါတယ်။
“မှတ်တမ်းပြား” လေးထဲမှာ ယာယီသိမ်းထား ။
မလိုချင်တော့ရင် “မှတ်တမ်းပြား”က နေဖျက်ပစ်လို့ရတယ်။
အဲတော့ ကျနော်လို့ ဘာမှ မတတ်တဲ့ ၀ါသနာရှင်တွေလက်ဆော့လို့ရသွားပါတယ်။
ငယ်ကတည်းက အလင်းတန်းလေးတွေ အလင်းစက်ကလေးတွေဖြာကျ
သစ်ရွက်ကြိုသစ်ရွက်ကြားကနေ အလင်းလေးတွေဖြာကျနေတာကို အမိအရဖမ်းဘို့
ကိုပေါက်ရေ… No.2 နဲ့5 ကို အရမ်းကြိုက်ပါ တယ်။
ဖလင်ခေတ်က ဓါတ်ပုံတွေအများကြီး ရိုက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ တစ်လိပ်လုံးရိုက်ခဲ့ပြီး ဖလင်ဆေးရာမှာ လက်ကလွတ်ကျပြီး အလင်းဝင် သွားလို့ ပုံတွေဆုံးရှုံးရတာလည်းကြုံဖူးပါတယ်။ အခုခေတ်တော့ လွယ်မှလွယ်… မကြိုက်ပြန်ရိုက်၊ မကြိုက်မချင်းရိုက်၊ ကောင်းမှကောင်း။
ရှခင်းတွေ၊ နေ၀င်နေထွက်တွေ အစား ဘ၀သရုပ်ဖေါ်လေးတွေ ရိုက်ပြီးတင်ပါအုံးလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံပညာ ဆိုတာထိုကဲ့သို့ ရှိသကိုး
ဖလင်ကင်မရာကို တစ်ခါမှ မကိုင်ဖူးခဲ့ပါကြောင်း(ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာကိုလဲ ထိုနည်း၎င်း)
ကြည့်ရှု့ခံစား လေ့လာမှတ်သား သွားပါကြောင်း
လေးပေါက်ရေ … ဒီပို့စ်နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး … အခုရက်ပိုင်း ခေါင်းတွေရှုပ်ထွေးပြီး ဦးနှောက်စားနေလို့ ဦးနှောက်စားစရာတွေဆို မဖတ်ဖြစ်ဘူး …. လေးပေါက်ကိုတော့ အားကျမိတာအမှန်ပဲ … ဂေဇက်မှာ ပုံတွေ ဝေေ၀ဆာဆာ မပြတ်တန်းတင်နိုင်သလို တစ်ခြားသူများရဲ့ပို့စ်တွေလည်း ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ် …. FB မှာလည်း ဓာတ်ပုံတွေတင်နိုင် … နေ့ခင်းဆိုလည်း အလုပ်ကို မနားမနေ လုပ်နိုင်သလို လူမှုရေးကိစ္စတွေလည်း မလစ်ဟင်းခဲ့ဘူး …. ဒါက ရှေးကုသိုလ်ကောင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်မလား … စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါနိုင်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေ့ါ ……….
လေးပေါက်ပို့စ်တွေမှာ မမန့်ဖြစ်ပေမယ့် ဓာတ်ပုံတွေကိုတော့ ကြည့်ဖြစ်တယ် .. တစ်ခါတစ်လေ လွမ်းစရာပုံ တွေ သတိရစရာပုံတွေဆို ရင်ထဲခံစားရလို့ သေချာမကြည့်တော့ဘူး ….. သမီးက တစ်ခုခုဆို စူးစူးနစ်နစ်ခံစားရတတ်လို့ ……….
minnannawarရေ ကျနော်က ရူ့ခင်းပုံရိုက်တာ ပိုအားသန်ပါတယ်.
နောက်အလင်းရောင် နဲ့ တိမ်တွေ၊ ရေထဲမှာအရိပ်ကျနေတာတွေကို ပိုသဘောကျတော့
ကိုပေါက်က လက်ဆော့ တဲ့အဆင့်ပါကွဲ့။
လေးပေါက်ပို့စ်မှာ ဆိုင် ဆိုင် မဆိုင် ကြိုက်တာရေးလို့ရပါတယ်။
နောက်အသက်ငါးဆယ်တန်းရောက်မှ အင်တာနက်ပေါ်ရောက် စာတွေရေး
ကင်မရာကိုင် လက်ဆော့ တွေလုပ်ရတာကိုးအေ့။
အဲတော့ ဘိုဆန်ဆန်လေးပြောရရင် နေသာတုန်းအ၀တ်လှန်းပေါ့အေ၊
မြန်မာဆန်ဆန်လေး ပြောရရင် မိုးရွာတုံး ရေခံပေါ့အေ။
အဲတော့ ကလေးတွေထက် ၀ါယမ ပိုစိုက်ရ ကိုယ်နားရမယ့် အချိန်တွေကို ဖဲ့ပေးရပေါ့။
ဒါတောင် မဒမ်ပေါက်က လေးပေါက်ဘာလုပ်လုပ် ခွင့်လွှတ်နေလို့အေ့။
လေးပေါက်အတွက်အိမ်ဆိုတာ ည အိပ်ချိန်လောက်ဘဲ နေတာလောက်ပဲဖြစ်နေပြီ။
ထမင်းစားတော့လဲ အလုပ်ထဲမှာ အိမ်ကထည့်ပေးတဲ့ ထမင်းချိုင့်နဲ့မနက်စာ စား။
ညကိုးနာရီကျော်ရင် အင်တာနက်ဆိုင်သွား 11ကျော်ပြန်လာအိပ်။
မနက်ငါးနာရီပါတ်ဝန်းကျင် ပြန်ထ လမ်းလျောက်။
အလုပ်ပိတ်ရက် မနက်ပိုင်းမဒမ်ကိုဈေးပို့ ဘုရားပို့
ဒီလို ဒီလိုနဲ့ဘဲ မီးသဂြိုဟ်မယ့် နေရာနဲ့ နီးသထက်နီးလာတာပေါ့။.
မသေခင်လေးမှာတော့ လုပ်နိုင်သ၍လုပ်သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါ၏။
ဒီကြားထဲ ဧည့်ဝတ်ကျေတာတွေကိုထည့်ပြောဦးလေ …. သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတွေလာရင် အပြေးအလွှားတွေ့ရ သွားရတွေလည်းရှိသေးတယ် …. လေးပေါက်လို့တော့မလုပ်နိုင်ဘူးလေးပေါက်ရေ ….. ရူးသွားလိမ့်မယ် …….
အဲ့ဒီ ရူးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို မြန်မြန် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တော့လေ
ဘာလို့ လူသိအောင် လျှောက်ပြောနေတာလဲ
သာမီးလေးကိုတော့ တားတားနဲ့ စိတ်ချလိုက်ပါလို့
ပုံနံပါတ် (13) လေးကို အကြိုက်ဆုံးပါ လေးပေါက်အိပ်ချိန်နည်းပြီး လမ်းမှန်မှန်လျှောက်တာတောင် နည်းနည်းဝနေတယ်ထင်တယ်နော် ဘဲဥ ပုံထဲမှာမြင်လိုက်တာပြောတာလေ
2009မှာ ဆေးရုံတက်တာပေါင်130 ထိကျသွားတယ်
အခုတော့ ပေါင် 180 ထိရောက်သွားပြိ
အကြိုက်ဆုံး(၂)ပုံကတော့ ….မှဲ့ မှဲ့ ရဲရဲအလင်းစက်နဲ့ 